5 Zvishandiso Zvinovandudza Zvako Zvako kubva Kubhuroka | Martech Zone
5 Zvishandiso Zvinovandudza Zvako Zvako kubva Kublogga
Chipiri, Mbudzi 11, 2014 China, Kurume 4, 2021 Ian Cleary
Iyo blog inogona kuve yakakura sosi yekutya kune yako webhusaiti, asi inguva inopedza kugadzira blog zvinyorwa uye isu hatiwanzo kuwana mhedzisiro yatinoda. Paunoita blog, iwe unoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana yakanyanya kukosha kubva pairi.
Muchikamu chino, takatsanangura zvishandiso zvishanu zvinobatsira kuvandudza mhedzisiro yako kubva kublogging, zvichitungamira kune yakawanda traffic uye, pakupedzisira, kutengesa.
1. Gadzira Yako Mifananidzo Uchishandisa Canva
Mufananidzo unotora pfungwa dzako uye kana ukasabata pfungwa dzevashanyi kubhulogi rako havazoriverengi. Asi kugadzira zvinokwezva, zvehunyanzvi zvinotaridzika mifananidzo zvinonetsa zvikuru uye zvinotora nguva uye, kana iwe ukawana rubatsiro rwehunyanzvi, zvinodhura!
Canva iri graphic dhizaini yekushandisa iyo inogonesa avo vasina ruzivo uye vasina hunhu vanhu kuti vagadzire mifananidzo pasina kukosha kwe graphic dhizaini yekugadzira.
Paunenge iwe wasarudza iyo mhando yemufananidzo iwe yaunoda kugadzira (Facebook post, Pinterest pini, blog graphic) unogona kusarudza kubva kuraibhurari yehunyanzvi dhizaini iyo ine mashoma mashoma tweaks anogona kugadziridzwa kuti akwane maitiro ako uye zvaunoda.
Ingo dhonza uye udonhedze yako wega akaisa mifananidzo kune iyo dhizaini (kana sarudza kubva rakakura raibhurari yemastock mifananidzo), isa maziso ekubata mafirita, kuafukidza nerugwaro uye zvimwe graphical zvinhu, uye zvimwe zvakawanda.
Sarudza dhizaini uye wozogadzirisa iyo mifananidzo, mavara, uye zvinyorwa
Kune yega yega blog post ita chokwadi chekuva nemufananidzo mumwe chete unokwevera muverengi wako mukati. Canva yakapusa intuitive mushandisi-interface iri nyore kugona kugonesa zvichikugonesa iwe kugadzira maziso anotora maziso kune ako blog mablog mukati memaminetsi. Paunoshandisa imwe nguva neCanva, unoshamisika kuti wakamborarama sei usina izvozvo.
2. Ongorora Vanokwikwidza Vako Vachishandisa Semrush
Kuuya nemazano ezvinyorwa zvakaoma zvakakwana asi kuziva kuti ndedzipi dzichakuunzira traffic kunogona kunge kwakaoma. Kuziva izvo zviri kushandira vako vanokwikwidza kunogona kupa zvakakosha mazano uye mazano kune yako wega blog.
kushandisa Semrush iwe unogona kupinda mumakwikwi ako webhusaiti kero uye utarise runyorwa rwemusoro mazwi akakosha ivo parizvino paGoogle Iwe unogona kuona iwo mazwi akakosha, inofungidzirwa kutsvaga kweayo akakosha mazwi uye zvimwe zvakawanda.
Kana mukwikwidzi wako ari kuwana traffic yeaya akakosha mazwi pamwe pane mukana wekunyora zvemukati zvichinangisa iwo akakosha mazwi kuti iwe ugone kutora vamwe vako vanokwikwidza traffic!
Asi yeuka, izvi hazvisi zvekuteedzera waunokwikwidza naye. Unogona kuumba chinyorwa chako chakakomberedza mazwi akakosha asi zvirimo zvinofanirwa kunge zvakasiyana. Iwe unoda kunyora chinyorwa chiri nani kupfuura vako vakwikwidzi uye nekuchisimudzira. Neimwe ongororo pa Semrush iwe unozodzidza zvakawanda zvakawanda pamusoro pevanokwikwidza uye izvi zvichakubatsira iwe kuzadzisa mhedzisiro yakawanda neako blogging.
3. Wedzera Chiyero chekushandurwa cheEndaneti Kunyorera uchishandisa Buda Chinangwa Popup
Kana iwe uchida kuvaka inoenderera vateereri kune yako blog rondedzero yeemail yakakosha zvakanyanya. Asi zvave kuramba zvichinetsa kukwezva kutariswa kwevashanyi vewebhusaiti yako uye kuvakurudzira kusaina-kana kunyorera kune yako email vashandure.
Nzira huru yekutora kwavo ndeye popup bhokisi rinokumbira yavo email kero. Asi popup mabhokisi anogona kuvhiringidza uye anokonzeresa kutsamwiswa paunenge uchivhura webhusaiti.
Nzira yakatsetseka uye inoshanda kutenderedza izvi kushandisa yekubuda chinangwa popup, iyo inoona kana iwe uchisiya saiti uye chete ipapo inoratidza popup. Unogona kunge uchitsvaga saiti kwemaawa uye hapana chinoitika asi paunongoedza kusiya webhusaiti popup ichaonekwa.
OptinMonster chishandiso chinoshanda kwazvo cheWordPress chinotsigira popup nechinangwa chekubuda. Imwe nzira yeOptinMonster ndeye Sumome iyo isingawanikwe chete paWordPress asi inogona zvakare kushandiswa pane mamwe mapuratifomu.
4. Shandisa Zvakanaka Kugovana Sarudzo
Kana vashanyi vakawana zvemukati pane yako saiti izvo zvinobatsira kune vateereri vavo iwe unoda kuita kuti zvive nyore kwavari kuti vazvigovane. Izvi zvinoreva kuve nekugovana zvidhori zvinoonekwa pawebhusaiti yako, saka kana mweya wacho ukavatora, zvinongobaya chete.
Flare inokutendera iwe kuti ubatanidze yakatwasuka uye yakatwasuka yekugovana mabara pane ako mapositi. Paunenge uchipururudza pasi nepositi mifananidzo yekugovana inoramba ichioneka nguva dzese. Munguva pfupi yadarika ivo vakawedzera zvirinani analytics papuratifomu saka ikozvino unogona kuona kuti ndeapi machira anowana iwo akawanda masheya achienzaniswa nekushanya. Ndivanaani vakurudzira vanogovana zvawatumira, uye zvimwe zvakawanda.
Ivo zvakare vane chaiko mushandisi inoshamwaridzika kugovana kune yako mobile vashandisi.
Kugovera pane mbozhanhare kuri kuwedzera kukosha asi iwe unofanirwa kuona kuti zviri nyore kugovana.
5. Goverana Zvekare Zvemukati kuburikidza neBuffer
Kazhinji, isu tinotarisana nekusimudzira zvinyorwa zvedu zvitsva uye tinokanganwa nezve huwandu hwakawanda hwemukati hwatove nahwo pane yedu webhusaiti iyo ichiri kubatsira uye yakakosha. Kana iwe uine zvakasvibirira zvemukati (zvemukati zvisingabude zvechinyakare) saka sei usingazvigovane nguva dzose.
Iyi ndiyo mhando yakakwana yemapositi ekugadzirira uye kuronga pamberi uye Buffer chishandiso chikuru kubata izvi. Kutanga, iwe unotsanangura nguva dzaunoda kuisa mishumo kune ako masocial chiteshi (Facebook, Twitter) uyezve iwe unongowedzera zvinyore kumutsara wako wakagadzirira kugoverwa pane inotevera inowanika nguva slot. Chishandiso chinowirirana kuBuffer chiri Bulkbuffer iyo inoita kuti iwe ugadzirire ese ako mapositi muspredishiti uye wozoapinza iwo kuBuffer saka ivo vanongoerekana vawedzerwa kumutsara.
Sarudza zvirimo pane yako saiti izvo zvichiri kukosha uye gadzira pepadheti pamwe neyakagadziridzwa iwe aunoda kugovana, uye tumira izvi kuBuffer kuti zvive nyore uye otomatiki kugovana.
Yako blog chinhu chakakosha kune rako bhizinesi uye nekudyara imwe nguva iwe unogona zvinoshamisa kuvandudza mhedzisiro yeblog rako. Muchikamu chino takarondedzera nzira shanu dzaungaite izvi. Ndeipi yauchazoshandisa? Iwe une chero chinhu chaungade kuwedzera?
Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri!
Nheyo yeKushambadzira Kwakanaka uye Kwakaipa
Kunzwisisa Facebook's Nhau Kudya Kwekutsanangudza Algorithm
Nov 13, 2014 pa2: 17AM
Yups…. kublogi chishandiso chakasarudzika chekuwana mibairo inosimba. Pasina mubvunzo, ihwo hwakawanda kunyora blog inoyevedza .Asi kana ikakundikana kubata pfungwa, ipapo zvese zvaunoedza zvinoenda pasina. Zvichava zvakanaka kuisa imwe shoma nguva uye nguva pane blogging kuti vanhu vazhinji vaungane pamusoro pezvakanyorwa zvinhu.
Maturusi aya, kana akashandiswa zvine hungwaru anozobereka zvibereko .Kunyanya kune vanotanga uye vasina ruzivo, maturusi aya anoita sepfuma.
Nekudaro, ndinotenda zvikuru nekuita kuti tizive maturusi aya ekuita basa rakangwara mukuwana kutarisisa kwevashanyi.
Nov 13, 2014 pa2: 26AM
Mbudzi 17, 2014 na7: 07 PM
Chinyorwa chikuru Ian. Ini zvechokwadi ndinodawo kuwedzera kuti kunzwisisa vateereri vako uye kunyora zvemukati zvinoenderana nezvinodiwa nevateereri vako zvakakosha pakubudirira!